Inkataka, Inkataca Fortress - La Paz
Amerika Atsimo Bolivia La Paz
Adiresy: Irupan, 150 km avaratra atsinanan'i La Paz, Bolivia
Ao amin'ny lohasin'ny renirano Chunga Mayu any Bolivia , vao haingana ny tranonkala malaza antsoina hoe Inkatara. Tamin'ny taona 2012 dia nahita fiarovana iray ireo mpikaroka, ka tsy nisy loharanom-baovao izay tsy fantatra. Araka ny voalazan'ny mpahay siansa, ny taonan'ny trano mimanda dia farafahakeliny arivo taona.
Fiarovana taloha sy ankehitriny
Ny zava-baovao dia ny fanombanana ny hevitra sy ny hevitra marobe. Ny sisa tavela tamin'ny trano mimanda, na dia teo aza ny taona sy ny karazana natiora, dia voatahiry tanteraka. Rehefa nandinika azy ireo izy ireo, dia nahavariana ny arkeolojista ary matetika nifamaly momba ny antony. Ankoatr'izay, ny tetikasa fanorenana sy ny trano fonenany dia notanterahana tamin'ny fomba tsy dia misy loatra amin'ireo sivilizasiona izay fantatsika, izay mbola nonina tao Andes. Na dia izany aza, ny fahitana, izay nahagaga ny arkeolojista, dia tsy nahagaga an'ireo teratany nahare angano maro momba ny fisian'ny fiarovana.
Androany, mbola tsy ampy fahalalana ny mpahay siansa momba ny kolontsaina izay niteraka ity rafitra mahafinaritra ity. Na dia izany aza dia misy soso-kevitra hoe ny tilikambo no lasa ateraky ny sivilizasiona Inca sy Tiwanaku . Ny anaran'ilay toeram-piarovana dia ilay renirano Chunga Mayu izay nitete tany amin'ny faritra, ny lohasahan'ilay heverin'ny Indianina ho masina.
Afaka mitsidika androany ny sisa tavela amin'ny tanàna mimanda. Ny ampahany sisa dia eo amin'ny sehatra ho an'ny daholobe, ny fitiliana dia maimaim-poana. Raha tianao ny handre ny angano sy ny fanoharana momba ny trano mimanda, mandinika azy amin'ny an-tsipiriany, ataovy azo antoka fa mampiasa ny tolotra torolàlana iray. Ity serivisy ity dia tsy lafo, tantara amin'ny teny espaniola sy anglisy.
Ny tanànan 'i Irupan no tanàna akaiky indrindra. Avy ao amin'ny fiarovana ny fomba tsara indrindra ahatongavana amin'ny fiara. Ny dia dia tokony halaina telo ora sy sasany.
Ny Katedraly ny Virjiny Maria (La Paz)
Ny fonjan'i San Pedro
National Park of Coffee
Ny volokano Gualatiri
Safidy momba ny fampifandraisana ireo wallpapers
Amboaran'ny efitra fandroana ao amin'ny trano
Jennifer Lawrence sy Nicholas Holt
Inona no fahasamihafana eo amin'ny sushi sy ny rolls?
Kely tsy hay hadinoina sy svenik
Ahoana no hanokafana ny masonao fahatelo?
Sakafo maina ho an'ny puppies
Aiza ny fialantsasatry ny Taom-baovao?
Ny tongotra diabeta - fitsaboana any an-trano
Sarimihetsika tsara ho an'ny ankizy
Salo anaty salope no fomba tsara indrindra
Diabeta ho an'ny hepatônina
Zoning ny efitrano
Niaiky i Lia Remini fa hamerina an'i Jennifer Lopez
Inona no lamaody amin'ny fahavaratra 2014?
Kitapom-bary - fitaterana
William Defoe tahaka an'i Marilyn Monroe amin'ny tsanganana fanesorana Creative Snickers